बैंक कर्मचारी बलात्कार आरोपमा पक्राउ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
जनकपुर शाखामा कार्यरत मेकानिक विजयकुमार न्यौपने
प्रकाशित मिति १६ जेष्ठ २०७५, बुधबार १९:४४ लेखक नेपालीजनता
धनुषा । एक बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर शाखामा कार्यरत मेकानिक विजयकुमार न्यौपनेलाई पक्राउ गरेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका– २४ की १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै बैंकका न्यौपाने पक्राउ परेका हुन् ।
उनलाई सहयोग गरेको आरोपमा ३७ वर्षीया सुनीतादेवी साहलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
उपमहानगरपालिका–३ घर भएका ४७ वर्षीय न्यौपानेले बालिकालाई घरमा बोलाएर विभिन्न प्रलोभन दिई बलात्कार गरेको आरोप छ । सुनीतादेवीले जेठ ७ गते बालिकालाई घरमा बोलाएपछि न्यौपानेले बलात्कार गरेको भन्दै पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जेठ ९ गते उजुरी गरेका थिए ।
पीडितको उजुरीका आधारमा स्थानीय महिला र नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई पक्राउ गरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गराएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । न्यौपानेले बलात्कार गरेपछि कसैलाई घटनाबारे जानकारी नगराउन भन्दै २ हजार रुपैयाँ बालिकालाई दिएको पनि खुलेको छ । पीडित बालिकाले घटनाबारे परिवारलाई जानकारी गराएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो ।
आठ हजार चिनियाँ इन्डक्सन अझै गोदाममा, समयमै मूल्य घटाएर बिक्री नगर्दा अनुदानको चुल्लो बिक्री भएन !
काठमाडौं । भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला चिन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको विद्युतीय…
मेलम्ची प्रकरण: भेन्डर र मजदुरले मागे पौने दुई अर्ब
काठमाडौं। मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग ८८ भेन्डर (सामान आपूर्तिकर्ता) र आठ सय मजुदरले भुक्तानी माग गरेका छन् । २९ मंसिरमा ठेक्का…
ओली निवासमा टाँसियो विप्लव पार्टीको पुर्जी
झापा । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दमकस्थित निवासमा…
काठमाडाैं । अरूको आँखा छल्दै फोहोरको पोको बोकेर कता लाग्दै हुनुहुन्छ ? कतै बाटोघाटो, चौबाटोको मोड र छिमेकीका घरढोकाअगाडि…
मृतकलाई क्षतिपुर्ती होइन समवेदना दिएर ओम अस्पताललाई उन्मुक्ति
काठमाडौं। प्रहरी प्रशासनको दबाबपछि ओम अस्पतालमा पित्तथैलीको पत्थरीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी महिलाको शव जबर्जस्ती उठाइएको छ ।…